Imibuzo evame ukubuzwa-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Imibuzo evame ukubuzwa ngama Paint Protection Film
Ngingayifaka i-wax imoto yami ngaphambi kokufakwa kweKPAL Paint Protection Film?
Kunconywa ukuthi ungafaki i-wax noma noma yikuphi ukumbozwa emotweni ngaphambi kokufaka ifilimu yokuvikela upende. Noma iyiphi i-wax noma ukumbozwa kuzophazamisa ukunamathela okufanele kwefilimu emotweni.
Ungasonga kanjani onqenqemeni nekhoneni kahle?
Ingxenye yokugoqa onqenqemeni idinga ukuhlanzwa ngamanzi ahlanzekile, bese isomiswa ngesibhamu sokubhaka noma umoya wemvelo, ukuze ikwazi ukubamba futhi ilingane kahle. Ijeli lokufaka le-KPAL linconyelwe ukuhlanzwa kalula.
Ungayigcina kanjani imikhiqizo esele ngemuva kokuyisebenzisa?
Ngemuva kokusika ifilimu, okusele kufanele kusongwe ukuze kugcinwe. I-PPF enefilimu ekhishwayo kufanele isongwe ngokuqinile, futhi i-PPF ngaphandle kwefilimu ekhishwayo kufanele ivulwe. Uma ifilimu ekhishwa esobala idwenguliwe, indawo yefilimu izobe ingalingani, imigodi emincane njalonjalo.
Ama-FAQ wamafilimu ewindi
Iyiphi indlela yokufaka isicelo esiyisebenzisayo kule filimu?
Le filimu kufanele ifakwe endaweni emanzi. Sidinga ukuhlanza indawo ngokuphelele futhi indawo engenawo uwoyela, igrisi, i-wax noma okunye ukungcola ngaphambi kokufakwa.
Ingabe ifilimu iyasithinta isignali esemotweni?
Cha. Ngemuva kokuvuselelwa kobuchwepheshe bokukhiqiza amafilimu amawindi, ifilimu yewindi yamanje ayinalo ithonya kusiginali esemotweni.
Ifilimu lewindi lizohlala isikhathi esingakanani?
Iningi lefilimu lewindi lemoto lingaba neminyaka engu-3-5 ngaphandle, kuya ngekhwalithi. Kwifilimu ejwayelekile yokuhlobisa isakhiwo, ingahlala iminyaka eyi-4-5. Futhi ngokwakha ifilimu yezokuphepha, ingahlala isikhathi eside.
Songa i-Vinyl Film FAQs
Ziyini izinzuzo zokugoqa imoto?
IVinyl yokugoqa imoto ingasuswa kalula ukuze kuthi lapho ufuna ukuthengisa imoto yakho ungamane uyibuyisele kumbala wayo wokuqala ngaphandle kokulahlekelwa yinani. Isizathu esikhulu esenza abantu basongwe izimoto zabo ukuthi bangathanda ukugcina imoto yabo kodwa bafuna umbala ohlukile.
Ngabe ukusongwa kwemoto kuzolimaza imoto?
Ukufaka ifilimu yokugoqa imoto ekhethekile emotweni yakho ngeke kulimaze umsebenzi wakho wokupenda. Kodwa-ke uma usuvele unezicucu zamatshe, imihuzuko noma amabala okugqwala emsebenzini wakho wokupenda kubalulekile ukukhumbula ukuthi lapho i-vinyl isuswa ingadonsa upende ovulekile nayo.
Ngikunakekela kanjani ukugoqwa kwami ​​kwe-vinyl?
Ukunakekelwa okufanele ukugoqa kuqala ngezinto eziyisisekelo. Ukugcina indawo yemoto yakho ihlanzekile yiyona nto oyikhathalela ngokuyinhloko, ngakho-ke ukugeza izandla njalo ukuze uqede ukungcola komhlaba kuyadingeka uma ufuna ukugcina ukugoqa kwakho kungangcoliswa noma kulimale ngenxa yomgwaqo.